Burmese Podcast Nerd - Poscast
Fiction, Sci-Fi , Thriller, etc.
Dear Stranger.... Don’t Give Up... Don’t lose hope... Cry, Laugh, Love, Live. Because you are human, we are the same!
Epi.6 "Twisted Ending Story" အမေမပြောပြခဲ့သောပုံပြင်များ
တစ်ခါက နာမည်ကြီး စာရေးဆရာ တစ်ယောက်ရှိပါတယ် သူက ရောင်းအားအကောင်းဆုံး သရဲ နဲ့ သည်းထိတ်ရင်ဖို ...
Ep.5 "Noisy Neighbour" အမေမပြောပြခဲ့သောပုံပြင်များ
အပေါ်ထပ်အခန်းက ည တိုင်း အသံတစ်ခု ကြားနေရတယ်...
Epi.4 "Influenza Virus Part.2" အမေမပြောပြခဲ့သောပုံပြင်များ
The Virus?? The Final Cure??
Epi.4 "Influenza Virus Part.1" အမေမပြောပြခဲ့သောပုံပြင်များ
Virus?? Who made it??
Epi.3 "The Interview" အမေမပြောပြခဲ့သောပုံပြင်များ
Long time no job interview.
Epi.2 "Artificial Intelligence" အမေမပြောပြခဲ့သောပုံပြင်များ
"သင်သာ ဒီအသံဖိုင်ကိုနားထောင်နေမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်က လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်းများစွာထဲက လုပ်သင...
Epi.1 "Alien" အမေမပြောပြခဲ့သောပုံပြင်များ
Sci Fi Thriller Podcast from Myanmar. Language : Burmese Edit, Mix and Narrated by Kyaw Swar Lwin.